Madaxweyne Ahmed Madoobe “Marna ma diidin dowlad Soomaaliyeed, marna ma diidin xaqa dastuurka uu siinayo dowladda” – Kalfadhi
September 6, 2020 September 6, 2020 Hassan Istiila
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islam oo booqasho rasmi ah ku yimid Golaha Aqalka Sare ee BFS, ayaa maanta Guddiga Joogtada ah ee Aqalka Sare ka hor-jeediyay warbixin, uu kaga hadlay arrimaha siyaasada oo ay ugu horreeyaan doorashooyinkii ka dhacay Jubbaland iyo mida hadda la isugu diyaarinayo federaalka.
Mudane Ahmed ayaa mar uu ka hadlayay dastuurka dalka, waxaa uu sheegay in mar walba doodiisa ay aheyd in dowladda Federaalka ay qaadato xaqa Dastuurka uu siinayo, iyagana ay qaataan xaqa uu dastuurka farayo.
“Marna ma diidin dowlad Soomaaliyeed, marna ma diidin doorka ay leedahay, marna ma diidin xaqa dastuurka uu siinayo laakiin mar walba doodeyda waxaa ay aheyd dowlada waxa dastuurka uu xaqa u siinayana ha yeelato annigana waxa uu xaqa noo siinayo aan qaadano”.
Soomaalinimadu ma ahan mid aan kalmad ku sheeganeyno, ee waa mid u baahan in laga dhabeeyo, maxaa yeelay waxaan garaneynnaa wadankan meeshii uu soo maray iyo halkii uu ka yimid, ayuu sii raaciyay.
Madaxweyne Axmed ayaa caddeeyay sida uu mar walba u doonayay in wada-hadal lagu dhameeyo khilaafkii jiray, isagna oo sidoo kale caddeeyay in Guddoomiyaha Aqalka Sare uu u sheegay in diyaar uu u yahay wada-hadal.
Madaxweynaha Jubbland oo Guddiga Joogtada ah ee Aqalka Sare ka hor-jeedinaya warbixin